u-Philander ubeka isonto ‘elinzima’ emuva kwakhe
Standard Bank Proteas bowler Vernon Philander
Ophosela ama-Standard Bank Proteas, u-Vernon Philander, uthi ubheke ukubeka isonto ‘elinzima’ emuva kwakhe njengoba elungiselela umdlalo we-Test yesine bedlala ne-England ozoqala e-Old Trafford e-Manchester ngoLwesihlanu. u-Philander ululeme kwi-viral infection eyaphazamisa umdlalo wakhe e-The Oval, lapho ubunzima bakhe kanye nokulawula kwakukhunjulwa kwisimo esimuthandayo.
Kusho okuningi ngezinga lakhe njengoba wayekwazi ukuthola ama-wicket amabili njengoba aphosa ama-overs angu-32 emdlalweni, athe aphoswe ngezinga eliphakathi ‘kwa-70-80’.
“Kubenzima kakhulu njengoba ngaphosa emuva kokulahlekelwa amanzi emzimbeni,” echaza emuva kokuthi iqembu lizilolonge e-Old Trafford ngoLwesithathu. “Ngalahlekelwa amanzi amaningi ngaphezulu nangezansi. Ubusuku esibhedlela, ngifakwe i-drip, kwabuyisela amandla kodwa kwabuya futhi ngosuku olulandelayo. Kukho konke, sengingcono, nginamandla futhi ngizinonge ngamanzi amaningi.”
Ama-Proteas kuzomele adlale umdlalo wokulinganisa i-series ukutakula i-tour enzima, futhi ukubuya kwa-Philander, kwisimo sezulu esiguqubele, umfutho odingekayo. Uyavuma ukuthi iqembu libheke amaphutha amaningi eliwenzile lihlulwa ngama-runs angu-239, futhi bazobe bebheke ukugcina isikhathi eside sokungaguquguquki ukufaka iqembu lasekhaya ngaphansi kwencindezi.
“Kudlalelwa yonke into,” ekhuluma nge-series. “Siziphoxile futhi kuningi okudlalelwayo. Ibiphansi phezulu le-series, kanye nokunqoba nokuhlulwa. Abafana bakulungele lokhu, sesikhulumile kabanzi kodwa abadlali bazothatha imidlalo yabo futhi ilungisele umdlalo olandelayo.”
“Sinomgomo weqiniso eqenjini,” esho echaza. “Sonke sivumile ukuthi akubanga umdlalo wethu we-Test omuhle. Njengabadlali, siyayithatha imidlalo yethu. Siziphoxile ngokushaya kwi-innings yokuqala, futhi sikhulume iqiniso ngakho. Sikubhekile ukulungisa amaphutha ethu kulomdlalo futhi sithemba ukulinganisa i-series.”
u-Du Plessis uthemba sengathi isimilo sika-Elgar singagqugquzela abanye abashayayo u- Bavuma on esibindi ubheke umsebenzi kuphela - Zulu translation Bavuma no-Morkel bavimba i-follow on ngaphambi kokuthi i-England iqhubekele phambili u-Roland-Jones no-Stokes bahole i-England Singawenza umthelela - u-Rabada u-Cook ugcina ama-seamer ama-Proteas kude ngosuku oluthathanayo -Du Plessis uyakhuza ngokukhululeka u-Amla uthemba ukuthi kungaba nomunye umlingo eqenjini alikhonzile u-Rabada obuyayo ‘ulindele ukudlala’ iCSA incoma amaMomentum Proteas ngomqhudelwano wawo wendebe yomhlaba ongakhohlakali AmaProteas ashaya i-England, abeka udaba olukhulu nge-series